Hormuud Salaam oo bixisay kharashka ku baxaya guurka 10 dhalinyaro oo baahiyaha gaarka qaba | Dhacdo
Hormuud Salaam oo bixisay kharashka ku baxaya guurka 10 dhalinyaro oo baahiyaha gaarka qaba
Hormuud Salaam Foundation ayaa bixisay kharashka ku baxaya guur wadareed sanadkan ay Hay’adda Guryasamo u sameynayso 10 dhalinyaro, oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba.
Munaasabad ay Hormuud Salaam Foundtion lacag dhan $25,000 (Shan iyo labaatan kun oo dollar ) ku gudoonsiinaysay masuuliyiinta Mua’sasada Guryasamo ayaa gelinkii dambe ee Talaadadii lagu qabtay Magaalada Muqdisho, waxaana ka qaybgalay munaasabaas martisharaf isugu jira Culumaa’udiin, Madaxda Hormuud Salaam Foudation iyo masuuliyiinta Mua’sasada Guryasamo, oo ka shaqaysa caawinta dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba iyo horumarinta arrimaha qoyska.
Drs. Idil Maxamed Cabdiraxmaan oo ah Madaxa Sanduuqa Kaalmada Guurka ee Xarunta Horumarinta Qoyska (Guryasamo) ayaa kaga mahadcelisay Hormuud Salaam Foundation taageerada iyo bixinta kharashka guur wadareedka sanadlaha ee xaruntoodu qabato, waxaana ay sheegtey in kaalmadaan wax weyn ugu fadhiso dhalinyarada is guurka loo sameynayo, iyadoo sanadkii hore ee Guryasamo guur wadareed u sameysay illaa shan qoys, kuwaa oo qaarkood ubad isu dhalay.
Cabdullaahi Nuur Cismaansman, Gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in HSF ay marwalba u taagan tahay caawinta dadka kuwooda nugul, isla-markaana ay ka jawaabeen codsigii horaan uga horyimi Xarunta Gursamo.
“Waxaan hadda ka soo jawaabnay codsigii nooga yimid Guryasamo ee ahaa inaan bixiyo kharashka ku baxaya dhismaha shanta qoys ee cusub ee baahiyaha gaarka qaba, oo qoyskiina uu ku baxayo shan kun oo dollar ($5,000), lacagtaasoo qaybna arooska looga bixin doono, qaybta kalena loogu samayn doono shaqo abuur.”
Gudoomiyaha ayaa xusay inay ku faraxsan yihiin in dhalinta guurka loo sameynayo oo dhawaan ka qalin-jebiyay Dugsiga Indhoolayaasha ee Al-Nuur, oo ay maalgeliso Hormuud Salaam Foundation, isagoo intaa ku daray in wax wanaagsan tahay in ardaydii ay soo barbaariyeen, ay maanta guursanayaan.
Gudoomiye Cabdullaahi ayaa sheegey in dhalinyarada guurkooda la qaban-qaabinaayo uu ku jiro will isagoo 7 jir, agoon ah laga soo qaaday xeryaha barakacayaasha, kaasoo ku barbaaray waxna ku bartay Dugsiga Al-Nuur.
Dhanka kale Maamulaha Dugsiga Al-Nuur oo isna ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay Hormuud Salaam Foundation ku ammaanay in had iyo jeer u taagan tahay garab istaagga iyo ka qayb qaadashada caawinaadda dadka baahiyaha gaarka ah qaba.
Maamule Cabdifataah ayaa sheegey in Iskuulkaan oo ah iskuulka ugu weyn ee ka jira dalka, ee ay wax ka bartaan dadka araga la’ ay kafaalo qaaday Hormuud Salaam Foundation, laga soo bilaabo sanadkii 2012, markaas ayaana iskuulka ugu horeysey horumar iyo wanaag badan oo uu helo, waana taa oo maanta ardaydii ka soo baxday ay guursanayaan, qaar ka mid ahna ay dhiganayaan jaamacadaha dalka.
Sheekh Cabdixayi Sheekh Aadan oo munaasabadaasi hadal ka jeediyay ayaa ku dheeraaday wanaagga iyo fadliga ay leedahay in la caawiyo dadka baahiyaha gaarka qaba, wuxuuna ku ammaanay Hormuud Salaam Foundation, sida ay mar walbaa u garab taagan tahay inta u baahan in la caawiyo ee bulshadeena ka midka ah. Sheekha ayaa Alle uga baryey in Shirkadda Hormuud Telecom iyo bahwadaagteeduba barakeeyo, isagoo dhinaca kale dhalinta guurka loo sameynayo u rajeeyay in Alle uu garabgalo.